Nahazo famotsoran-keloka : Lany tany amponja ny fahatanoran’i Odon - L'Hebdo de Madagascar
#4 • Actualites • Onjam-piainana
Nandritra ny 35 taona no nigadra nitety ny fonjan’i Tsiafahy sy Nosy Lava ary Antanimora, Andriamamonjisoa Odon Michel. Talen’ny fampisamboram-bola tao amin’ny bankin’ny Tantsaha mpamokatra na Btm, ny taona 1984 ny asany andavanandro sady mpandraharaha amin’ny fanondranana omby velona nankany amin’ny nosy La Réunion sy Maurice ary Kénya
Nisy taratasy fampiatona tsy fahazoana manondrana avy amin’ny Dgdie, tamin’ny fotoan’androny, tamin’ny fanondranana fanindroany nataony rehefa tonga tany Toamasina ny omby saika haondrana. Niara-voatazona am-ponja niaraka taminy ny lehiben’ny zandarimaria tao Mahitsy sy ny Ben’ny tanànan’i Mahitsy. Gadra sy asa an-terivozona mandritra ny folo taona no sazy an’izy telo mirahalahy tao amin’ny fonjan’i Tsiafahy. Nafindra tany amin’ny fonjan’i Nosy Lava taty aoriana. Niverina tao amin’ny fonjan’i Tsiafahy rehefa nofoanana ny fonjan’i Nosy Lava ary tao amin’ny fonjan’Antanimora mialohan’ny nahazoany famotsoran-keloka tamin’ny filoham-pirenena, ny alakamisy 31 oktobra 2019.
Teraka tamin’ny 13 novambra 1952, Andriamamonjisoa Odon Michel. Maty vady ary niteraka telo mianadahy. Talen’ny fampisamboram-bola tao amin’ny bankin’ny Tantsaha mpamokatra na Btm, ny taona 1984 no asa nosahaniny. Tetsy ankilany, nirotsaka ho mpandraharaha manana karatra amin’ny fanondranana omby velona nankany amin’ny nosy La Réunion sy Maurice ary Kénya ny lehilahy. Tsy nisy ny olana tamin’ny fanondranana voalohany raha ny fitantarany. Nidina nankany Toamasina, tamin’ny fanondranana faharoa, hanara-maso ny fiaingan’ny entana aondrana. « Nahazo taratasy avy amin’ny Dgdie amin’ny fampiatoana ny fanondranana. Tsy ara-dalana, hono, ny fanondranana nataoko kanefa mazava tsara ny taratasin’omby rehetra rehefa nohamarinin’ny zandary ary nandalo tamin’ny Ben’ny tanàna », hoy Andriamamonjisoa Odon Michel, mitantara ny fiantombohan’ny fahoriany sy ny filazany fa nahavoafitaka ny mpitondra.
Nosamborin’ny mpitandro filaminana avy hatrany, Andriamamonjisoa Odon Michel sy ny lehiben’ny Zandary ary ny Ben’ny tanànan’i Mahitsy. Notanana am-ponja vonjimaika mandrapiandry ny fotoam-pitsarana. « Omby nangalarina avokoa, hono, ireo omby saika haondrana kanefa omby manana taratasy ara-dalana. Maty tany am-ponja io lehiben’ny zandary io fa ilay Ben’ny tanàna no tsy fantako izay niafarany. Manana ny karatry ny mpandraharaha amin’ny fanondranana ny tenako ary fanondranana faharoa io nahavoasaringotra ahy io », hoy Andriamamonjisoa Odon Michel, nalahelo tamin’ny fanendrikendrehana nahazo azy.
Nahatoky ny fizotran’ny fitsarana, Andriamamonjisoa Odon Michel ka tsy naka mpisolo vava. Nisy ny fiandrasana sy ny fiantsoana ary ny famezivezena nandritra ny telo volana teny amin’ny Fitsarana. « Migadra folo taona an-tranomaizina sy asa an-terivozona no sazy azoko. Firaisana tsikombakomba amin’ny halatr’omby no niampangana anay » hoy hatrany Odon, nisento lalina.
Ny fonjan’i Tsiafahy no nimpidirana an’Andriamamonjisoa Odon Michel, voalohany nanefany ny saziny. Tsy tadidiny ny fotoana nijanony tao amin’ny fonjan’i Tsiafahy noho ny fahaverezan’ny fitadidiany. « Namboly voanjobory sy katsaka ary voatavo no nandaniana ny andro teny Tsiafahy. Tsy niantehitra tamin’ny sakafo nozaraina tao am-ponja », hoy Andriamamonjisoa Odon Michel, mitantara ny fiainany tao amin’ny fonja nandritra ny taona maro.
Nafindra nankany amin’ny fonjan’i Nosy Lava ny lehilahy izay tsy nazava taminy ny antony, nandritra ny enina taona raha ny filazan’ny olona niara-nigadra taminy tao Antanimora. Naverina tao amin’ny fonjan’i Tsiafahy izy rehefa nakaton’ny fanjakana ny fonjan’i Nosy Lava. « Niteraka aretim-po ny tsy fitsidihan’ny zanako sy ny fianakaviana nandritra ny fitetezako ireo fonja ireo. Ny gadra rehetra mba misy mpanati-tsakafo sy mpamangy fa ny ahy honjohonjoko samy irery. Ny gadra namana no mizara sakafo rehefa fetin’ny fahaleovantena sy ny taom-
baovao. Tena potika tanteraka ny hoaviko iray manontolo », hoy hatrany Odon, malahelo ny fiainany gadra lava kanefa manana ny fahaizany sy ny toerany ambony fony niasa.
Nanao asa ivelan’ny fonja, Andriamamonjisoa Odon Michel ka nanambady ary niteraka vavy. Noho ny halavan’ny fotoana nitazonana am-ponja dia nanambady ilay vehivavy. Ankehitriny, ny zanany vavy sy ny mpiara-mivavaka amin’ny zanany no miaramisalahy amin’ny fiandrasana azy eny amin’ny hopitaly.
Trafics : Littoral Mahafaly Androka, zone rouge en braconnage de tortues radiées